Semalt Expert: Ny tetikasan'ny tetikasa Google dia manampy amin'ny fanafihana fanafihana avy amin'ny hackers
Tokony hanomboka hahafantatra ny sandan'ny orinasa goavana ny olona. Tena tsaraOhatra amin'izany ny nataon'i Google ho an'ny mpanao gazety iray izay niharan'ny fanafihana DDoS. Nifofofofo ny orinasa ary nindrana ny fitaovana mampiavaka azyhery hametrahana ny hack - source one technical solutions website.
Brian Krebs dia mpitoraka bilaogy momba ny fiarovana amin'ny fahanterana. Nanomboka ny fanafihana rehefa nampiharihary nydratsin'ny orinasan'ny orinasam-pianakaviana iray, izay namaly faty tamin'ny famoahana fanafihana DDoS (zaraina momba ny fandàvana) ny rafitra.Ny DDoS dia tsy vaovao satria ny mpampiasa dia mampiasa azy tsindraindray. Na dia izany aza dia tsy mitovy ny tranga manokana, ary ny hack dia natanjaka noho nymandrakizay. Nanaiky i Krebs fa efa niatrika fanafihana DDoS teo aloha, saingy tsy nisy na inona na inona tamin'ity.
Artem Abgarian, ny Semalt Senior Manager Success Manager, mino fa ny anton'izany dia ny fisian'ny fitaovam-piadiana mahery kokoa mihoatra noho ny teo alohamba hanatanterahana ny fanafihan'izy ireo. Tamin'ny voalohany, ireo tanjona malaza indrindra dia PC taloha tranainy. Izy ireo dia mandidy azy ireo matetika mba hitondrana spamfifamoivoizana amin'ny tranon'ilay niharam-boina miaraka amin'ny tanjona handondonana izany ivelan'ny aterineto. Miaraka amin'ny fahasamihafan'ny fitaovana an-tserasera ety anaty aterineto, ireo hackers amin'izao fotoana izaoMaro ireo fahafahana miara-mifidy azy ireo.
Tao amin'ny raharaha Krebs, nampiasa botnets ireo atidoha mba hanombohana ny fanafihana. Dia avy eonanandevozana ny IoT (Internet of Things) fitaovana entin'ny mpamaham-bolongana..Izy ireo dia IP mpamerina indrindra, routers, ary mpamoaka horonantsary,Izay rehetra mahazo aterineto. Ny ankamaroan'ny fitaovana nomena anarana dia manana tenimiafina somary marefo na henjana mba hiarovana azy ireo amin'ny fampidirana.
Ny tranokalan'ny Krebs dia loharanom-baovao tena ilaina ho an'ny mpihaino azy an-tseraserany fiarovana ny fiarovana. Amin'ny fampiasana safidy maro azon'izy ireo, araka izay voalaza etsy ambony, dia nahavita nandondona ilay tranonkala izy ireo, ary azo antoka izanydia nijanona ela be izy. Ny fanafihan'ny DDoS amin'ny hackers dia endrika vaovao sivana. Ny fanafihana dia nitazona fanazavana avy amin'ny mpanatrika.
Amin'izao fotoana izao dia mety hanontany tena ny amin'izay mety hitranga ao anatin'izany rehetra izany i Google. Iray amin'nyNy fanavaozam-baovao farany avy amin'ny Google dia ny nananganana "Project Shield". Ny tetikasan'ny tetikasa dia ny hanavotra ireo mpanao gazety toy izanytahaka ny Krebs. Manakana azy ireo tsy hahazo fanafihana DDoS ao amin'ny vohikalany izany.
Ny tetikasa Shield dia manome ny mpamaky ny mpanao gazety mba hahafahan'izy ireo mampiasa azy ireo mba hialanafitohanan'ny fifamoivoizana amin'ny tranonkala miaraka amin'ny fikasana hanàla izany. Ny rafitra dia tsy mahasoa afa-tsy amin'ireo mpanao gazety izaymihatra amin'ny hackers. Ny fampiasana azy ihany koa dia mipoitra any amin'ireo firenena izay miverimberina manivana ny votoatiny amin'ny fampiasana fanafihana DDoS amin'ny azy ireofitondram-panjakana.
Tamin'ny voalohany dia nanao fifanekena tamin'ny orinasa antsoina hoe Akamai i Krebs mba hikarakarana ny votoatiny.Na dia izany aza, ny orinasa fitantanana ny votoatiny dia tsy afaka ny hiaro ny tranonkala amin'ny fanafihana lehibe toy ity. Orinasa iray hafanilaza tamin'ny Krebs fa ny karazam-panompoana azon'i Akamai dia nahafaty azy teo akaikin'ny $ 200,000 isan-taona.
Mba hanapahana fohy tantara lava, ny fanenjehana ny tranokalan'ny Krebs dia endriky ny an'nyzava-dehibe ny olona tokony hapetraka ao amin'ny tranokala fiarovana. Raha tsy mampiasa an'i Google ho an'ity tanjona ity ny orinasa hafa dia manolotra tolotra mitovy amin'izany.Amin'ny fampiasana ity tombontsoa ity, ny tompon'ny tranonkala dia mampihena ny loza ateraky ny fanafihana DDoS, satria mampiasa azy ireo ho toy ny hackers izao ny sivana matanjakafitaovam-piadiana.